I-CopyQ: umphathi webhodi lokunameka onezici ezithuthukile | Kusuka kuLinux
ICopyQ iyi-cross-platform ethuthukile nomphathi webhodi yokunameka yomthombo ovulekile Inemisebenzi efana nomlando, ukusesha nokuhlela, nokusekelwa kombhalo, i-HTML, izithombe, nanoma iyiphi enye ifomethi yangokwezifiso.
I-CopyQ inikeza izici zokuhlela nokubhala. Gada ibhodi lokunamathisela lesistimu bese ugcine okuqukethwe kuma-guides wangokwezifiso. Ibhodi yokunameka egciniwe ingakopishwa futhi inamathiselwe ngqo kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza.
1 Mayelana ne-CopyQ
1.1 Izici ze-CopyQ
2 Ungayifaka kanjani i-CopyQ ku-Ubuntu 18.04 kanye nokuphuma kokuvela ku-PPA?
3 Ungayifaka kanjani i-CopyQ ku-Ubuntu 18.04 nezinto eziphuma ku-Flatpak?
4 Uyisebenzisa kanjani i-CopyQ?
5 Ungayikhipha kanjani i-CopyQ kusuka ku-Ubuntu nakwezinye izinto?
Inokubukeka okwenziwe ngezifiso ngokuphelele (imibala, amafonti, ukwenza izinto obala), isikhombimsebenzisi somugqa womyalo osezingeni eliphakeme, iskripthi, nezinqamuleli ezahlukahlukene zohlelo.
Ngohlelo ungenza ngokwezifiso imenyu yethreyi, ugcine izinto kumathebhu noma uzulazule ngokushesha ezintweni, uhlele izinto, udale okusha, uhlele, ususe, ukopishe futhi unamathisele kuthebhu ehlukile, namathisela ngokushesha iwindi eligxile kuthileyi noma iwindi eliyinhloko bese ungakunaki okuqukethwe okukopishiwe kwamanye amawindi noma uqukethe umbhalo othile.
Ukusekelwa kweLinux, Windows ne-OS X 10.9+
Gcina umbhalo, i-HTML, izithombe noma enye ifomethi yangokwezifiso
Dlulisa amehlo ngokushesha futhi uhlunge izinto kumlando webhodi yokunameka
Hlunga, dala, hlela, susa, kopisha / unamathisele, hudula bese uphonsa izinto kumathebhu
Faka amanothi noma amathegi ezintweni
Izinqamuleli ezibanzi zohlelo ezinemiyalo eyenziwe ngokwezifiso
Namathisela izinto ngesinqamuleli noma kuthileyi noma iwindi eliyinhloko
Ukubukeka okwenziwe ngezifiso ngokugcwele
Isixhumi esibonakalayo somugqa womyalo ophezulu nokubhala
Ziba ibhodi yokunameka ekopishwe kusuka kwamanye amawindi noma equkethe umbhalo
Izinqamuleli ezilula ezifana ne-Vim nokusekelwa komhleli
Ungayifaka kanjani i-CopyQ ku-Ubuntu 18.04 kanye nokuphuma kokuvela ku-PPA?
Uma ufuna ukufaka lolu hlelo lokusebenza kusistimu yakho kufanele wenze lezi zinyathelo ezilandelayo.
Into yokuqala esizoyenza ukufaka indawo yokugcina yohlelo ohlelweni lwethu, ngalokhu sizovula ukuphela kwe-Ctr + Alt + T bese uthayipha umyalo olandelayo:
Uma lokhu sekwenziwe, sizobuyekeza uhlu lwethu nge:
Futhi ekugcineni sizofaka uhlelo lokusebenza nge:
Ngalokhu sizobe sesivele sifakwe i-CopyQ ohlelweni lwethu.
Ungayifaka kanjani i-CopyQ ku-Ubuntu 18.04 nezinto eziphuma ku-Flatpak?
ICopyQ iyatholakala ngefomethi yeFlatpak, okuwukuphela kwento edingekayo ukuze ukwazi ukufaka uhlelo lokusebenza olusuka kule ndlela ukuthola ukwesekwa kwalobu buchwepheshe ohlelweni lwethu.
Okokufaka kwakho sizovula i-terminal Ctrl + Alt + T bese sisebenzisa umyalo olandelayo:
Kuzodingeka silinde kuphela ukuthi iphakheji ilandwe futhi ukufakwa kwenziwe, lokhu kungathatha imizuzu embalwa kuya ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi.
Kwenziwe ukufakwa manje usungaqala ukujabulela uhlelo lokusebenza, ungayifuna kwimenyu yakho yohlelo lokusebenza ukuze uyiqhube.
Uma kwenzeka ungayitholi, ungayisebenzisa ngomyalo olandelayo kusuka esibulalayo:
Uyisebenzisa kanjani i-CopyQ?
Lapho uhlelo seluqalile ohlelweni lwethu, singasebenzisa i-CopyQ ngezindlela ezimbili, eyokuqala ivela esibonakalayo sayo sokuqhafaza (i-GUI) kanti enye ingeyolayini womyalo.
Njengoba kuyibhodi lokunamathisela, uhlelo lokusebenza eselivele lisebenza luzoqala ukusebenza ngokushesha nje lapho sihlela idokhumenti noma sisebenzisa inetha.
Ukuhlela imininingwane egcinwe ku-CopyQ singenza okulandelayo.
Izinto ezikhethiwe kungaba:
Ukukopisha okuqukethwe kubhodi yokunameka Ctrl + C
Ukuhlela sicindezela u-F2
Ukususa sicindezela inkinobho Susa
Hlunga ukulandelana kokuqukethwe Ctrl + Shift + S, Ctrl + Shift + R
Kunamathiselwe ewindini ebelisebenza ngaphambilini i-Enter
Ukuphuma kuhlelo, khetha Ukuphuma kumenyu yetreyi noma cindezela u-Ctrl + Q ewindini lesicelo.
Ungayikhipha kanjani i-CopyQ kusuka ku-Ubuntu nakwezinye izinto?
Uma ufuna ukususa lolu hlelo kusuka ohlelweni lwakho kufanele uvule ukuphela bese usebenzisa le miyalo:
Ukususa okugcina kusistimu kufanele sibhale ku-terminal:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » ICopyQ - umphathi webhodi yokunameka enezici ezithuthukile